ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5တစ်ဦး Wingman ဖြစ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 15 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင့်ရဲ့အနားမှာတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကျွမ်းကျင်သူလက်ရုံးတစ်ယောက်ရှိခြင်းသည်သင်တစ်ဦးဆင်းလှသောမိန်းမသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်နှင့်အတူချန်ထားမည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်. အောက်တွင်, ကျနော်တို့အဆုံးစွန်လက်ရုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြုစုကြပြီ.
အုပ်ချုပ် #1: ပထမဦးဆုံးချဉ်းကပ်သောသူသည်, ရွေးချယ်ခြင်း
ရိုးရိုးသားသား, ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအုပ်စုချဉ်းကပ်ကြောင့်ပစ်ချဒါမှမဟုတ်ချွတ်ရိုက်မခံရအန္တရာယ်ကိုတစ်ဦးစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်ဖို့သတ္တိရှိဖို့. ဒါဟာအစအမျိုးသမီးတွေနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုကြာ. ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်: အောင်မြင်စွာပထမဦးဆုံးချဉ်းကပ်သောသူသည်, မိန်းမများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်စရာရရှိသွားတဲ့.
အုပ်ချုပ် #2: သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလက်ျာဆက်ဆံပြီး
အမျိုးသမီးများဟာအထူးသဖြင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားယောက်ျားအကြောင်းကိုလေ့လာရာမှအများကြီးလေ့လာသင်ယူ. သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသင်သိအအေးဆုံးလူမျိုးဖြစ်ကြ၏တူပြုမူ. ဒီယုံကြည်မှုပယ်ဖြာလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချက်ချင်းသငျသညျဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အများကြီးပိုဖြစ်လိမ့်မည်မသာ. သငျသညျတဆယ်မိနစ်သိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အသင်၏မိတ်ဆွေများများနဲ့ပြောင်းလဲရုံသငျသညျကိုအပူတပြင်းဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်.
အုပ်ချုပ် #3: အချိုးကိုလေးစားပါ
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးထူးဆန်းအရေအတွက်ပြောနေတာလျှင်, အချိုးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးကိုကူညီအုပ်စုချဉ်းကပ်ဖို့ cue အဖြစ်ယူ. သတိရ, သငျသညျအထူးသဖြင့်တဦးတည်းမိန်းကလေးနှင့်အတူကချွတ်ရိုက်တက်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်, သင်ဆဲအုပ်စုနှင့်အတူနေရန်လိုအပ်. ကမိန်းမနှင့်စွန့်ခွာသင်သည်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြဆိုလိုတာကလျော့နည်းသင့်ရဲ့ကောင်လေးလက်ရုံးတစ်ယောက်ချန်ထားမည်. အချိုးပင်ဖြစ်ပါသည်လျှင်ထွက်သွားဖို့အဆင်ပြေသည်တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးလှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူတယောက်တည်းအချိန်ရလမ်း.
အုပ်ချုပ် #4: လုပ်ပါနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်နိုင်ခြင်းသည်အဘယ်သို့ဆိုရ
ဤနည်းဥပဒေ wingmen များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်. သင်၏အဆွေခင်ပွန်းရေချိုးခန်းထဲမှဝင်သို့မဟုတ်တစ်သောက်စရာတိုးလာတယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနှင့် non-တိုက်ရိုက်လမ်းအတွက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုအကြောင်းပြောဆို. ဆုကြေးငွေမှတ်, သူစိတ်ဝင်စားသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုကြပါဘူး. သူမ၏မိတ်ဆွေများကစကားပြောနှင့်သူတို့ကပြန်လုပ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း.
လည်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းသင်၏အဆွေခင်ပွန်းကိုရှောင်ရှားဖို့ကူညီ, ကညဉ့်ကိုဆင်းအကွေ့အကောက်များသောကြောင်းပုံရသည်အခါ, အံ့သြဖွယ်ရှုမြင်ခံစားတယောက်နောက်ဆုံးသောက်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိဖို့လမ်းလျှောက်တက်အကြံပြု.
အုပ်ချုပ် #5: ဂိမ်းကျော်ပြီဖြစ်ပါသည်တူပြုမူ
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်မိန်းမကိုအကြားကမီးပွားမြင်ပြီးတာနဲ့သူစိတ်ဝင်စားင်, သူတို့ပြီးသားစုံတွဲတစ်တွဲများမှာတူသရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပြောနေတာကိုစတင်ရန်. ၏ဒီနည်းပညာ “ဘောင်”, အမြိုးသမီးမြားကို ပို. အမှန်တကယ်ကပြောပါတယ်လျက်ရှိသည်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထက် Sub-ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ထိခိုက်နေကြပါတယ်အဖြစ်အံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်.
10 ကြောင် Boyfriend မှသာလွန်ထူးကဲဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ
5 သင်ချိုးနှင့်အဝေးကွင်း မှစ. run သင့်ချိန်းတွေ့မညီကြောင်း